Kenya Oo Qulan-Qulshaha Laga Gawracay Welise Indhahay Soo Cadeyneysa Si Loo Damba-baso Tuuganimadooda .. Magacyada 15-Garsoore Ee Maanta Go'aanka Ka Gaartay Kiiska Bada
Hague -Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inta badan kiiskii dacwadda badda ee kala dhaxeeyey Kenya, ayada oo loo xukumay dhul-badeedkii la isku hayey badankiisa, sida ay go’aamisay Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ) .. Maxkamadda ayaa marka hore diiday doodda Kenya ay aheyd inuu jiro heshiis ama is-faham labada dal ay isku raacsan yihiin oo ah inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka, waxayna ayidday doodda Soomaaliya oo aheyd inaanu jirin heshiis noocaan oo kale ah.
Magacyada Garsoorayaasha Maxkamada Ee Go'aanka Gaaray
1- Ronny Abraham – wuxuu ka soo jeedaa dalka Faransiiska, kaas oo ka tirsanaa maxkamadda caddaaladda adduunka tan iyo 2005, wuxuu u dhashay 1951, waana aqoonyahan bartay cilmiga shuruucda caalamiga.
2- Cabdulqawi Axmed Yuusuf – waa xubin ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda ICJ. Cabdulqawi ayaa xilka madaxwaynaha maxkamadda ICJ ka degay bishii February ee sannadkan 2021 .. Cabdulqawi ayaa horey waxaa uu la taliye dhanka sharciga ah uga soo noqday qaar ka mid ah hay’adaha Qaramada Midoobey. Dalalka uu wax ku soo bartay waxaa ka mid ah Soomaaliya, halkaasi oo sidoo kale uu bare ka noqday Jaamacaddii Umadda.
3- Garsoore Joan Donoghue – Waxay ku dhalatay magaalada New York, waxay aheyd taliye ku xigeenka arrimaha sharciga wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, waa profasoor ka tirsan jaamacadda George Washington gaar ahaan kuliyadda sharciga.
4- Giorgio Gaja – wuxuu u dhashay dalka Talyaaniga, wuxuu maxkamadda ku biiray 6-dii February sanadkii 2012.
5- Garsoore Daiveer Bhandari – Wuxuu kasoo jeedaa Hindiya, wuxuuna maxakamadda ku biiray 2012-kii. Wuxuu muddo ka badan 20 sana garsoore ka ahaa Hindiya.
6- Xue Hanqin – waxay ka soo jeedaa Shiinaha, waa haweeneyda kaliya ah ee kasoo jeedo qaaradda Aashiya ee ka tirsan maxkamadda, waxay ku biirtay sannadkii 2010, waxayna arrimaha sharciga ka dhigtaa jaamacadda Wuhan.
7- Garsoore Peter Tonka – wuxuu ka soo jeeda dalka Solvakia, waana xubin joogta oo ka tirsan maxkamadda, gaar ahaan qeybta xallinta khilaafaadka.
8- Patrick Lipton – wuxuu u dhashay dalka Jamaica. Hal sana ayuu maxkamadda joogaa, wuxuu horey uga soo shaqeeyay Qaramada Midoobey.
9- Garsoore Christopher Greenwood – wuxuu ka soo jeedaa UK, wuxuna maxkamadda ku biiray 2009-kii.
10- Kirill Gevorgian, Ruushka ayuu u dhashay. Wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayuu horey uga soo shaqeeyay, wuxuuna maxkamadda ICJ ku biiray sannadkii la soo dhaafay.
11- Julia Sebutinde – waa garsoore ka tirsan maxkamadda ICJ tan iyo 2012, waana haweeneyda kaliya ah ee ka soo jeedda qaaradda Afrika ee ka tirsan maxkamadda. Waxay shahaadada PhD ka qaadatay Jaamacad ku taalla UK, waxayna ku takhasustay arrimaha sharciga.
12- Garsoore Antonio Augusto Trindade – Wuxuu ku dhashay Brazil sannadkii 1947, wuxuuna shahaadada PhD ka heystaa shuruucda caalamiga, wuxuu ka tirsanaa maxkamadda ICJ, tan iyo sannadkii 2009.
13- Hisashi Owada – wuxuu ku dhashay dalka Japan sannadkii 1932, waa parofasoor cilmiga shuruucda caalamiga ah ka dhiga jaamacadda New York.
14- James Crawford – wuxuu u dhashay Australia. Sannadkii la soo dhaafay ayuu maxkamadda ku biiray, wuxuuna bare iyo garsoore ka ahaa dalkiisa.
15- Maxamed Bennouna – wuxuu ka soo jeeda dalka Morocco, wuxuuna maxkamadda kusoo biiray 2006. Waa bare dhiga culuumta xeerarka caalamiga.